दिनेश गौतम काठमाडौं, ५ माघ
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुने शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् । लामो कसरतपछि बनाइएको पाठ्यक्रम विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेर बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।
बायोलोजीका विद्यार्थी मारमा
खगेन्द्र अधिकारी, उपप्राध्यापक (गणित), त्रिवि
पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार विज्ञान संकायका विद्यार्थीले कम्तिमा १०० पूर्णाङ्कको गणित पढ्नैपर्थ्यो । तर, अहिले विद्यार्थीले गणित नपढे पनि हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम बनाइएको छ । गणितलाई ऐच्छिकमा राखिएको छ । विशेषत: यसको असर बायोलोजीका विद्यार्थीलाई पर्नेछ । बायोलोजी विषय रोज्नेले गणित विषय पढ्न पाउँदैनन् ।
११ र १२ मा गणित विषय नपढेपछि एमबीबीएस र जनरल साइन्सको बायोलोजी समूहबाहेकका अन्य कोर्स उच्च शिक्षामा ती विद्यार्थीले पढ्न पाउँदैनन् ।
इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञानलगायतका कोर्स पढ्न वञ्चित
कम्तिमा १०० पूर्णाङ्ककोे गणित नपढ्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे कृषि तथा वन विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञानलगायतका कोर्स पढ्न विद्यार्थी वञ्चित हुन्छन् ।
बायोलोजीमा गणित पढेका विद्यार्थीले त्रिविबाहेकका विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ कोर्स पढ्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, अबको पाठ्यक्रमले गणित नपढेपछि बायोलोजी पढेका विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँदैनन् ।
पोखरा, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरूमा इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि कोर्स पढ्न कम्तिमा १०० पूर्णाङ्कको गणित उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
कक्षा ११ र १२ मा बायोलोजी पढेका सबै विद्यार्थीले एमबीबीएस नै पढ्छन् भन्ने हुँदैन । अब ती विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने ?
त्यस्तै, व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीका लागि पनि गणित आवश्यक पर्छ । अब विद्यार्थीले अर्थशास्त्र र गणितमध्ये एक मात्र रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्तिमा १०० पूर्णाङ्कको म्याथ पढ्नैपर्छ
नवराज पौडेल : कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख तथा विषय समिति प्रमुख
पहिलाको कोर्समा १०० पूर्णाङ्कको गणित पढ्नैपर्ने थियो । तर अहिले नपढे पनि हुने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । साइन्स पढ्ने विद्यार्थीका लागि गणित अनिवार्य हुनुपर्ने हो । उच्च शिक्षामा त्रिविको सीएसआईटी कोर्स पढ्न कम्तिमा १०० पूर्णाङ्कको गणित पढेको हुनुपर्छ ।
म्याथ नै नभएपछि भोलि कसरी भर्ना लिने ? त्यसैले कम्तिमा १०० पूर्णाङ्कको गणित विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ ।
विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि त झन् असर पर्छ । विद्यार्थीले जीआरई गर्नुपर्छ । त्यसमा गणित पढ्नैपर्छ । विद्यार्थीको विदेश यात्रासमेत रोकिन सक्छ ।
११ र १२ टर्सरी हो कि स्कुल हो ?
कक्षा ११ र १२ आधारभूत स्कुल हो कि विशिष्टिकृत ? ११ र १२ कक्षालाई पश्चिमा भाषामा टर्सरी एजुकेसन र हाम्रो भाषामा उच्च माध्यमिक शिक्षा भनिन्छ ।
११ र १२ कुन एजुकेसन हो भन्ने सैद्धान्तिक लडाइँ छ । स्कुल लेबलको हो भने सबै विषय पढाउनुपर्छ । त्यसमा म्याथ पनि परिहाल्छ । तर, ११ र १२ स्पेशल कक्षा हो भने म्याथ उच्च शिक्षामा पढ्न पनि सकिन्छ ।
हाम्रो कोर्स पश्चिमाहरूबाट डिजाइन गरिएको छ । विद्यार्थीलाई साइन्स पढ्ने इच्छा छ तर म्याथमा कमजोर छ भने, म्याथ कहाँ पढाइ हुन्छ, त्यहीँ गएर छुट्टै पढ्न सकिन्छ । अनलाइन, ओपन कलेज वा म्याथ पढाइ कहाँ हुन्छ, त्यहीँ गएर पढ्न सकिन्छ ।
अहिले दुई थरीको लडाइँ चलेको छ । म्याथ नराखे साइन्सको कोर्स पुग्दैन भन्ने एक थरी छन् । साइन्समा म्याथ राखे धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन् किन पढ्ने भन्ने अर्को थरी छन् । यो सैद्धान्तिक लडाइँको अन्त्य हुनुपर्छ ।
विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार कोर्स बनाउने हो कि कोर्सअनुसारको विद्यार्थी फिट बनाउने ? कोर्स भनेको साझा हुनुपर्छ । तर, विद्यार्थीका लागि बेसिक कुरा भने दिइनुपर्छ । म्याथ, साइन्स, सोसियलका बेसिक कुरा पढाउनुपर्छ । स्पेसल पढ्नका लागि ब्रिज कोर्स वा अनलाइनबाट पढाउन सकिन्छ ।
अनि,पाठ्यक्रमका विषयमा देखिएको विवाद विश्वविद्यालय, परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र पश्चिमा देशका विज्ञ राखेर हामीले खोजेको के हो, छलफल चलाउनुपर्छ । त्यहीँबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ५, २०७६, ०४:२५:००
#बहसमा पाठ्यक्रम #गणित